Tag: adwords | Martech Zone
Akwụ ụgwọ Search: Nzọụkwụ 10 iji merie ịkwụ ụgwọ kwa Pịa
A ahịa ebipụta a na-akwụ ụgwọ mgbasa ozi na-akwalite a ngwa ngwa quote na ad… oku na-aga na a oku center ebe ndị see okwu na-adịghị nyere. Oops. Onye ahịa ọzọ na-agbagharị mkpụrụ okwu ugboro ugboro ebe ọ bụ na ha anaghị enweta mgbanwe. Oops… ụdị nzụta nyefere peeji nke ahụghị. Onye ahịa ọzọ jikọtara CAPTCHA n'ụdị usoro ndu… nke anaghị arụ ọrụ n'ezie. Oops. Ndị a bụ ihe atụ niile na-efu ụlọ ọrụ ọtụtụ puku dollar akwụ ụgwọ
Wzọ 13 na-eme ka ọdịnaya dị na ntanetị
Thursday, January 5, 2017 Friday, December 1, 2017 Douglas Karr
Otu ezigbo enyi kpọtụrụ m n'izu a ma kwuo na ya nwere onye ikwu nwere saịtị nke na-enweta okporo ụzọ dị mkpa ma ha chọrọ ịhụ ma ọ bụrụ na e nwere ụzọ isi akpata ego na ndị na-ege ntị. Azịza ya dị nkenke bụ ee… mana ekwenyeghị m na imirikiti obere ndị na-ebipụta akwụkwọ na-amata ohere ma ọ bụ otu esi eme ka uru nke ihe onwunwe ha baawanye. Achọrọ m ibido na pennies… wee rụọ ọrụ n'ime
Etu igwe mmụta na akụrụngwa ga-esi azụ ahịa gị
Tuesday, July 5, 2016 David McIninch
N'oge mgbanwe usoro mmepụta ihe ụmụ mmadụ mere dị ka akụkụ nke igwe, guzo n'akụkụ usoro mgbakọ, na-anwa ime ka onwe ha rụọ ọrụ dị ka igwe dị ka o kwere mee. Dika anyi banyere na nke a na akpo “4th Industrial Revolution” anyi anabatala na igwe di nma karia oru. N'ime ụwa nke mgbasa ozi ọchụchọ, ebe ndị njikwa na-eme ka oge ha dị n'etiti iwuli mkpọsa ihe, na ijikwa ma melite ha.
A Complete Set of Atụmatụ Dịkwuo gị Peraa Kwa Pịa Advertising ROI
Ọ bụ ezie na ozi eserese a sitere na Datadial steeti maka obere azụmaahịa, aga m eme ihe n'eziokwu na anyị na ụfọdụ ụlọ ọrụ na nnukwu azụmaahịa na-arụ ọrụ anaghị eji ọtụtụ ndụmọdụ ndị a eme ihe! Nke a nwere ike ịbụ ndepụta zuru oke nke ndụmọdụ m hụrụ mgbe a bịara n'iji ụgwọ nkwụnye ụgwọ ọ bụla na Google nke ọma. Agbanyeghị ụlọ ọrụ gị, usoro ị nwere ike iji mee ka ndụ dịrị PPC mfe ịbụ otu. Ihe omuma a
Etu etu ọnụahịa ụlọ ahịa si emetụta AdWords ahịa
Tọzdee, Machị 12, 2015 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Scott Donald
Google weputara atụmatụ AdWords na ngwụcha ọnwa Julaị iji nyere ndị na-azụ ahịa aka ịme mkpebi ịzụrụ nke ọma. Ndepụta Ndepụta Ngwaahịa (PLA) n'ofe Google.com na Shozụ ahịa Google ga-enwezi ngwaahịa ma ọ bụ ntụle ịzụ ahịa Google. Chee echiche na Amazon na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ị ga-ahụ mgbe ị na-achọ ngwaahịa na ọrụ na Google. Ntụle ngwaahịa a ga-eji sistemụ kpakpando 5 mee ihe na nyocha dị mkpa. Ka anyị kwuo na ị nọ n’ahịa maka onye na-eme kọfị ọhụrụ. Mgbe ole
Esi meziwanye ogo Google Adwords
Saturday, October 6, 2012 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-etinye ego na Google Adwords naanị iji chọpụta na mmefu ego ha apụla ma ọ nweghị azụmaahịa ha nwetara. Ezie na ọ na-egosi na elu na Google Adwords bụ nanị ikele na n'elu usoro, ọ bụghị. Enwere ọtụtụ ihe na - emetụta itinye mgbasa ozi gị - nke ga - emetụta mmefu ego gị. Site na Infographic: Otu esi emeziwanye Google Adwords Ogo ogo site na DigitalNetAgency: Ogo Google
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchekwa ego ole na ole ma ọ bụghị ka ndị mmadụ pịa mgbasa ozi gị iji bịa na saịtị gị na ha ga-anọrịrị, cheta ịtinye saịtị gị na ntanye mgbasa ozi asọmpi na Google Adsense.